भारतमा को’रोना झनै खतरनाक बन्यो, झन्डै एक लाख संक्रमित थपिँदा दिल्लीमा कर्फ्यू – Gorkhali Dainik
भारतमा को’रोना झनै खतरनाक बन्यो, झन्डै एक लाख संक्रमित थपिँदा दिल्लीमा कर्फ्यू
April 6, 2021 571
काठमाडौं : भारतमा को’रोना भाइरस झनै खतरनाक बनेको देखिएको छ। सोमबार भारतमा पहिलोपटक एक लाख संक्रमित थपिँदा आज मंगलबार यहाँ एक लाख कै हाराहारीमा को’रोना संक्रमित थपिएका हुन् । को’रोना भाइरस विश्वमा देखिएको एकवर्ष पुरा भाइसक्दा पनि भारतमा भने कोरोनाको त्रास रोकिन सकेको छैन। भारतमा यतिबेला विश्वमै सबैभन्दा बढी संख्यामा कोरोना संक्रमित थपिरहेका हुन्।
भारतको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गएको २४ घण्टामा भारतमा ९६ हजार ९८२ संक्रमित थपिएका छन्। सोही अवधिमा यहाँ ४४६ को मृत्यु भएको छ। यससँगै भारतमा कुल को’रोना संक्रमितको संख्या १ करोड २६ लाख ८६ हजार भन्दा बढी पुगेको छ। यहाँ कोरोनाका कारण १ लाख ६५ हजारको मृ,त्यु भइसकेको छ। गत जनवरीदेखि नै भारतमा कोरोनाविरुद्धका खोप कार्यक्रम संचालन भएका छन्।
हालसम्म यहाँ ८ करोड ३१ लाख १० हजारमा खोप लगाइएको छ। तर खोप कार्यक्रम जारी रहँदा पनि पहिलेभन्दा बढी यहाँ दैनिक संक्रमित बढ्दै गएका हुन्। यसैबीच को’रोनाको खतरालाई मध्यनजर गर्दै भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा रातिको समयमा क’र्फ्यू लगाइएको छ। मंगलबार देखि अप्रिल ३० तारिखसम्म राति १० बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म यो नियम लागू भएको बीबी सीहिन्दीले जनाएको छ।
Prevबेलायतमा आगामी सोमबारदेखि लकडाउनमा केही खुकुलो गरिने
Nextवीरेन्द्रनगरमा आँखा पोल्ने तुवाँलो देखा परेको छ
वि.सं.२०७७ साल असोज २० गते,ईश्वी सन् २०२० अक्टोबर ०६ तारिख…मंगलबार को राशिफल…!
सावधान ! आजबाट घरबाहिर निस्कदै हुनुहुन्छ भने, यो सूचना पढेर निस्कनुहोला –